Hawlwadeennada dalxiiska ee Tansaaniya ayaa roogga cas u rogaya wakiilada socdaalka caalamiga ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Hawlwadeennada dalxiiska ee Tansaaniya ayaa roogga cas u rogaya wakiilada socdaalka caalamiga ah
Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Hawlwadeennada dalxiiska ayaa rooga gaduudan u rogaya wakiilada socdaalka caalamiga ah si ay dhowaan u gaadhaan Tansaaniya taas oo qayb ka ah qorshaheeda weyn ee dib loogu bilaabayo warshadaha dalxiiska ee balaayiinka doolar ah ee ka dambeeya masiibada COVID-19.
Dalxiiskii mawjadda arxan darrada ah ee Coronavirus, dalxiiska ayaa ah warshad lacag-ku-rogista Tansaaniya.
Waxay abuurtaa 1.3 milyan oo shaqooyin hufan, waxay soo saartaa $ 2.6 bilyan sanadkii, oo u dhiganta 18 iyo sidoo kale 30 boqolkiiba GDP -ga dalka iyo rasiidhada dhoofinta, siday u kala horreeyaan.
Ururka Dalxiisayaasha Tansaaniya (TATO) wuxuu hadda ka shaqeynayaa habeen iyo maalin isagoo wakiil ka ah 300-xubnood oo lagu daray si uu u keeno daraasiin wakiillada socdaalka ah dhammaadka Sebtember 2021.
"Waxaan u rogeynaa gogosha soo dhaweynta daraasiin wakiilo socdaal oo caalami ah, taas oo qeyb ka ah istiraatiijiyad cusub oo lagu suuq geynayo meeshii aan u soconnay ka dib [COVID-19] masiibada," ayuu yiri agaasimaha ururka, Mr. Sirili Akko.
Wakiilada, ama sida badan oo iyaga ka mid ah ay maanta doorbidaan - la -taliyayaasha safarka ama naqshadeeyayaasha - caadiyan waxay iibiyaan meelaha dalxiiska waxayna fududeeyaan hannaanka qorsheynta safarka ee dalxiisayaasha, marka lagu daro inay bixiyaan adeegyo la -talin iyo baakadaha safarka oo dhan.
“Qorshaheennu [waa] inaan wadno 300 oo wakiil oo socdaal oo caalami ah 12 -ka bilood ee soo socda, oo u dhiganta 25 wakiil bishii, si aan u sahamino oo aan u aragno sida Tansaaniya loogu hibeeyay qurux dabiici ah oo aan la tartami karin,” ayuu yiri Mr. Akko.
Iyada oo la raacayo taageerada Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay (UNDP), TATO waxay si weyn u maalgelisay marka la eego waqtiga, xirfadaha, iyo maaliyadda si ay Tansaaniya uga dhigto meel ammaan ah oo raaxo leh oo ku jirta qorshaheeda xasaasiga ah ee lagu soo jiidan karo socotada ugu sarreeya ee waddanka iyada oo la adeegsanayo xeelado suuq-geyn la beegsaday dhawr suuq oo muhiim ah.
Natiijooyinka Cilmi-baarista Suuqa Allied waxay muujinayaan in suuqa dalxiiska ee raaxada adduunka uu gaari doono $ 1.2 tiriliyan muddada 2021-2027 oo leh isku-darka kobaca sanadlaha ah ee 11.1 boqolkiiba.
Fikradda oo dhan ayaa ah in la joogteeyo soo kabashada warshadaha dalxiiska ee xanuunsan si loo dhiirrigeliyo ganacsiyada kale, loo soo celiyo kumanaan shaqo oo luntay, dakhli loogu soo saaro dhaqaalaha.
Qorshaha ah in la keeno wakiilada socdaalka adduunka ee dalka ayaa la yaab leh, maaddaama hawlwadeennada dalxiisku ay isku dayayaan inay kala duwanaadaan istiraatiijiyaddooda suuqgeynta si ay u soo jiitaan booqdeyaal badan iyo kor u qaado tirooyinka dalxiiska si looga badbaado weerarada halista ah ee ka imanaya meelaha kale ee masiibada COVID-19 kadib.
Falanqeeyayaasha warshadaha dalxiiska ayaa sheegaya in dadaalka, dhab ahaantii, uu soo jeedinayo isbadal taariikhi ah oo lagu sameeyo istaraatijiyadda suuqgeynta, maadaama dhaqan ahaan habka hawl wadeennada dalxiiska loo leexiyay dhanka safarka dibadda si kor loogu qaado meelaha dalxiiska ee hibada leh ee dalku si aad u weyn.
Guddoomiyaha TATO, Mr. Wilbard Chambulo, ayaa sheegay in ururkiisu uu ku hawlanaa qorshayaal badan oo dib loogu soo nooleynayo warshadihii dalxiiska ee sariirta jiifay.
“Waxaan qaadannay fikrad aan ku beddeli karno istiraatiijiyadda, maxaa yeelay waxay ka dhigaysaa suuq -geyn iyo dareen dhaqaale oo aad u badan in la keeno wakiillada socdaalka si ay u arkaan aragtiyaha dalxiiska dabiiciga ah ee dalku siiyay marka loo eego xubnahayaga si aan ugu raacno dibadda iyaga oo leh sawirro socda oo socda, gaar ahaan wixii ka dambeeyay masiibada COVID-19, ”ayuu xusay Mr. Chambulo.
TATO, oo ay weheliso Wasaaradda Caafimaadka, ayaa dhowaan soo saartay tallaalka COVID-19 ee ugu ballaaran oo lacag la’aan ah kaas oo arkay kumanaan ka mid ah shaqaalaha safka hore ee warshadaha dalxiiska oo qaata jabs ka hor xilliga dalxiiska ugu sarreeya.
Ururku wuxuu kaloo horumariyey kaabayaasha caafimaadka aasaasiga ah ee wareegyada dalxiiska ee muhiimka ah, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen waxyaabo kale, haysashada ambalaasta dhulka, heshiisyo lala galay isbitaallada qaar si loogu adeegsado adeegyada dalxiisayaasha haddii ay timaaddo xaalad kasta oo dhacda, iyo isku xirka mashruuca iyo adeegyada dhakhaatiirta duulaysa - dhammaantood waa dadaal lagu soo noolaynayo warshadii dalxiiska.
Dhawaan, TATO waxay ku guuleysatay inay soo saarto, iyadoo la kaashaneysa dowladda, xarumaha ururinta muunadaha COVID-19 ee Kogatende iyo Seronera ee bartamaha iyo waqooyiga Serengeti siday u kala horreeyaan.
Nasiib wanaag, dadaalladan asaasiga ah waxay si uun u bilaabeen bixinta saami qaybsiga iyaga oo amar ku bixinaya qaar ka mid ah taraafikada isla markaana kicinaya boosaska cusub ee xubnaha TATO.
Edelweiss, oo ah hogaamiyaha ugu weyn ee firaaqada ee Switzerland, ayaa ku dhawaaqday inay ku dari doonto Kilimanjaro, Zanzibar, iyo Dar es Salaam oo ah 3 -meelood oo cusub oo ay ku tagi doonto Tansaaniya laga bilaabo Oktoobar, taasoo rajo wanaagsan siin doonta warshadaha dalxiiska.
Edelweiss, oo ah shirkad walaalo ah oo ka tirsan Lines International Air Lines oo xubin ka ah Kooxda Lufthansa, waxay ku faantaa saldhig macaamiil ku dhawaad ​​20 milyan oo adduunka oo dhan ah.
Caarif Axmed wuxuu leeyahay,
Ogosto 26, 2021 markay tahay 12:10
Waad salaaman tahay mudane/marwo waan ku faraxsanahay haddii aad na caawin karto annagu ma haysanno macaamiil tan iyo labadii sano ee la soo dhaafay waxaan ku leeyahay saddex hoy oo duurjoog ah oo aad u qurux badan koonfurta Tansaaniya 🇹🇿 fadlan 🙏🏼